The Ultimate Guide To Italy si Best Yoga ebe | Save A Train
Home > Inzọ Njem Italytali > The Ultimate Guide To Italy si Best Yoga ebe
site Miriam Cihodariu
(Emelitere ikpeazụ On: 24/03/2020)
Otu n'ime ihe ndị kacha mma ihe banyere Italy dị ka a ezumike ebe bụ na ọ bụghị ihe ị na nanị ọkọ anya gị ịwụ ndepụta. Ị nwere ike laghachi Italy ugboro ugboro ma ka na-enweghị ezu nke a ọmarịcha ala na ya na-atọ ụtọ n'ego ụgbọ, ma-egwu na ya akụkọ ihe mere eme na omenala.
Dị otú ahụ bụ na amara nke Mediterranean mkpuru nke a mba na-enye fọrọ nke nta ka ọ bụla ụdị ezumike i nwere ike na-eche nke. The ugbu ndu ga-elekwasị anya na-Italian yoga ebe. ma, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ihi na a yoga ichighaazu, ọ bụ ike na-eleghara ihe ndị ọzọ Italy ebube.
The nri na-doro anya na-aga na-abịa n'ime anya kemgbe Italian nri bụ n'etiti ndị kasị mma na ụwa na mba ahụ bụ na-a na-ewu ewu na-aga n'ihi na ndị nwere mmasị na culinary ezumike. The ìhè ugwu jikọtara maa mma coastlines kwa ka Italy a na-ewu ewu na-aga maka ịgba ígwè ememe, ghara ikwu agụụ mmekọahụ nke na ọtụtụ surfers ebu maka ya.
Italy na a ilekiri
na 2017, a ndekọ-na-agbasa 60 nde ndị njem nleta gara obodo. Italy bụ ndị dị otú ahụ a na-ewu ewu ezumike ebe n'ihi isi ihe abụọ kpatara. Na mbụ, na eke mara mma nke fọrọ nke nta ọ bụla obodo na mpaghara na Italian ala bụ pụtara. Ị nwere lush ubi vaịn na anwụ na-acha ugwu nta, breathtaking ugwu, nakwa dị ka ọtụtụ coastlines na egwu Farisii hotspots na maa mma azu obodo nta, tụgharịa akụkọ ihe mere eme ncheta.
Ekwu okwu nke akụkọ ihe mere eme, na nke a bụ n'ezie ihe nke abụọ mere na-eme ka Italy dị otú ahụ a akwa ebe na-aga. ọ bụla n'ógbè, obodo na obere obodo na-ede akụkọ ihe mere eme na. Dị ka na-amalite mgbe nke Alaeze Ukwu Rom, Italy nwere ike chere na nke dị ka a ku n'aka nke mepere anya. The narị afọ gara aga nakwa kwukwara a ọma ọdịnala nkà na omenala ke ofụri isi Italian obodo. Na a nutshell, ị nwere ike ghara ina-gbụrụ ebe a.
Ọzọ oké ihe banyere Italy? N'ihi na mba ahụ nọ n'otu kama mbubreyo na mpaghara ghọrọ usoro ọzọ ma ọ bụ obere iche iche, e nwere ọtụtụ ndị obodo esi nri, onye ọ bụla distinctively dị iche iche si ọzọ. Nke a pụtara na ị nwere ọtụtụ nke akatabi okop na-agbalị n'ihu!
Verona na Milan Ụgbọ oloko
The Best ebe Ime Yoga na Italy
Tuscany bụ a dị ịrịba ama na mpaghara Italy na otu kpamkpam chọọ-mgbe njem nleta. Ọ bụghị naanị na mpaghara-kpọmkwem mba nri na-eme ka onye ọ bụla na-eche dị ha rutere heaven, ọ bụ nakwa na pụrụ iche nlegharị anya na nnukwu ọdịdị ntọala. The obere ugwu na ndagwurugwu ebe a ike pụtara echiche, ma ha na-dị mma maka wineries, nke Tuscany nwere ọtụtụ.
Ya mere, ị kwesịrị ị na-enwe anya na-achọpụta na ọtụtụ yoga mgbaba na Tuscany na-enye wine akatabi okop tours, ma ọ bụ ọbụna ha na-enye yoga na wine na klas site na mmalite, na ijikọta ndị kasị mma nke ma ụwa. My ndụmọdụ? Gaa maka ya! The mmanya i nwere ike nụrụ ụtọ ebe a na maa mma obodo nke Tuscany ga-abụ otu nke gị fondest ezumike echeta mgbe.
Milan na Siena Ụgbọ oloko
Florence na Siena Ụgbọ oloko
Perugia na Siena Ụgbọ oloko
Rome na Siena Ụgbọ oloko
Sardinia bụ ihe ọzọ na-ewu ewu na mba mgbe ịga Italy, na ezi ihe kpatara. Ya lush coastline-eme ka ọ a mmasị ebe maka ma yogis na surfers ebe ọ na-enye ọtụtụ nke ọma surf, ma nakwa dị ịrịba ama ebe nke na-atụgharị uche ma ọ bụ na-eme anyanwụ salutations.
Nke a nnukwu agwaetiti nwere fọrọ nke nta 2,000 kilomita nke oké osimiri, ma n'ime obodo na-enye ugwu na ọtụtụ hiking ụzọ ụkwụ, ma ọ bụrụ na nke a bụ kwa n'etiti gị ọdịmma. Ọzọkwa, dị ka aha nke agwaetiti na-egosi, ọhụrụ azụ na Erimeri na ụba ebe a, ka gị uto buds ga-abụ na nke a na-emeso.
Olbia ka Cagliari Ụgbọ oloko
Cagliari na Olbia Ụgbọ oloko
Sassari na Olbia Ụgbọ oloko
Olbia ka Sassari Ụgbọ oloko
The Ragusa ógbè bụ ọzọ a mmasị yoga na-aga n'ebe Italy na a Surfer si mmasị dị ka nke ọma (ebe ọ na-emi odude ke Isuo Sicily). Si yoga na beach iguzo na-elu-naa yoga, i nwere ike ịhụ ihe niile obi gị na-achọ nke yoga na mmiri sports na ihe niile dị n'etiti. Ife Yoga na Ragusa ga-fanye gị batrị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị gaa ya ke mbubreyo n'oge okpomọkụ mgbe ikuku na-zuru okè na anyanwụ bụ nwayọọ.
Messina na Ragusa Ụgbọ oloko
Syracuse ka Ragusa Ụgbọ oloko
Taormina ka Ragusa Ụgbọ oloko
Palermo na Ragusa Ụgbọ oloko
The Amalfi n'ụsọ oké osimiri na-abụghị nanị a ogige eden ịgagharị na-atọ ụtọ nri ma ọ bụ na-ekpori ndụ mmiri egwuregwu ogologo ụbọchị dum ma na-a ọkacha mmasị ebe maka yogis n'ụwa nile. The crystal-doro anya azure mmiri na nwayọọ ikuku-eme ka ọ na ezigbo n'ihi na dị nnọọ banyere ihe ọ bụla yoga omume i nwere ike na-eche nke, si anyanwụ salutations ịtụgharị uche sessions na ọbụna na-agba egwú yoga.
Milan ka Salerno Ụgbọ oloko
Florence na Salerno Ụgbọ oloko
Bari ka Salerno Ụgbọ oloko
Rome ka Salerno Ụgbọ oloko
Ọ dịghị nleta Italy nwere ike gārapu Rome dị ka a njem ebe tinyere gị njegasi. The Trevi Iyi, na Vatican, Rom Forum, na Sistine banye n'Ụlọ Ekpere na ya pụtara n'uko na Colosseum bụ ma a ole na ole nke amanyere bụ iwu nke akara ị ga-ahụ mgbe e.
Ọ bụ ezie na ọ bụ isi obodo, 'The Ebighị Ebi City' na-nwere ọtụtụ Omume ebe gburugburu ya, nke bụ kpọmkwem ihe mere yoga mgbaba na Rome na-ewu nnọọ ewu.
Bologna ka Rome Ụgbọ oloko
The art isi obodo nke ụwa, Florence na-a tụsiri ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya pụtara ngosi ihe mgbe ochie na breathtaking ochie ije. ochie, ọcha ụlọ na maa mma n'ezigbo n'okporo ámá ga-eme ka ị na-eche dị ka ị na-na na rutere a Renaissance nrọ, nke bụ kpọmkwem ihe Florence bụ. The iconic dome na Uffizi galari bụ ma abụọ nke ebe mkpa ka ị gaa na ịghọta kpọmkwem ihe mere omenala Olee banyere anyị taa nke Europe malitere ebe a na njedebe nke Middle Ages.
Rimini na Florence Ụgbọ oloko
Rome na Florence Ụgbọ oloko
Pisa na Florence Ụgbọ oloko
Venice na Florence Ụgbọ oloko
M nwere a nkwupụta mee: mgbe m gara Venice, M n'ezie chere na m nwere ike ịbụ a-enweghị ebe obibi onye ebe a na-enwe obi ụtọ (bụghị aza ajụjụ maka oyi oge, ezie). M na-apụtaghị ewere mgbalị nke ndị na-enweghị ebe obibi, n'ezie, ma ọ bụ dị nnọọ na obodo bụ otú serene, N'agbanyeghị na arọ njem nleta okporo ụzọ, na ị na-eche mgbe udo tinyere ya ọwa mmiri niile. M chere na ike na-ehi ụra n'okpuru oghe igwe ebe a, na balmy Italian abalị ikuku gburugburu m na-esi isi nke oké osimiri, na-eri iberibe nri nke ihe ọ bụla na obodo trattorias gburugburu nwere, na dị nnọọ adị otú, ka, obi ụtọ.
My Ihunanya efu onwe, Venice bụ nanị mara mma ma na a ga--ahụ mgbe na a ezumike na Italy. The ochie obodo na-ejedebeghị ya agwaetiti, ma e nwere ọtụtụ yoga mgbaba na Venice ma ọ bụ gburugburu ya nke bụ a ta n'ihu n'ebe ọ (ọhụrụ akụkụ nke obodo, dị nnọọ gafee akwa).
Trento na Venice Ụgbọ oloko
Florence na Venice Ụgbọ oloko
Trieste na Venice Ụgbọ oloko
Italy na Yoga
Yoga jidere na na Italy kama na nso nso, dị ka mba na-aghọ ndị ọzọ ihe nke a njem nleta ebe na yoga na-enwe a revival na ewu ewu, mba. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị njem nleta na-abịa Italy na-achọ ụfọdụ àgwà mkpụrụ obi-nchọgharị oge na ha na-yogis, enwe yoga mgbaba na Italy dị bụ esote ezi uche nzọụkwụ.
N'ihi na mba bụ achọghị ịzụ kasị ewu ewu ezumike ebe ke Europe, ọ dịghị mkpa na yoga enweghị ọtụtụ nwa afọ mgbọrọgwụ na Italy. The omume jidere na ngwa ngwa na nke ọma nke na ị nwere ike ugbu a chọta yoga mgbaba na ọ fọrọ nke nta n'akụkụ ọ bụla nke Italy.
Ị dị njikere inyocha Italy? nke kacha mma website ka Order ụgbọ oloko Tickets bụ Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-italy-yoga/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / ya / de ma ọ bụ / pl na ndị ọzọ asụsụ.
Miriam is an avid world explorer and a yogi. I love exploring world cuisines and reading fiction from all over the world. When I am not busy, I expand my collection of teas and spends some time petting the neighborhood cats. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
Top 5 Kasị Beautiful Oké ọhịa Na Europe
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Norway, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Gịnị Bụ The Best Book na-echekwa na Europe
Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Top 5 Ọnọdụ With The Best Nightlife Na Europe
Train Travel Britain, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zọ njem Sweden, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe
Chọọ hotels na ndị ọzọ ...
Lelee na-na ụbọchị
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Aug 2020Sept 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021Mee 2021Jun 2021Jul 2021
10 Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe
7 Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem
10 Oge Ezumike Ọhụụ Kachasị mma na Europe
Nduzi Atụmatụ Europe na Zụọnụ Europe
nyefereỤdị a na-osụk, Biko chere a bit.